Iphupha lokungahoyi Discover ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Xa siyityeshela into, ubukhulu becala sizama ukungayiqapheli into size siyibethe ngabom. Inokuba malunga nezinto ezininzi: abantu, iimpawu ezingathandekiyo, izinto ezisicaphukisayo, nokunye okuninzi. Igama "ukungahoyi" livela kwisenzi sesiLatin "ungayihoyi" kwaye lithetha "ukungazi" okanye "ukungazi."
Ithetha ntoni iphawu "lokungahoyi" kuthi? Ukutolika kuyatshintsha kancinci kuxhomekeke kumxholo apho ulwazi lubonakala lujonga kude.
Ekuqaleni singathanda ukukuchazela ezo meko zamaphupha uninzi lwabaphuphi abasichazela lona. Oku kubandakanya, umzekelo, indoda ethile ingakhathaleli umphuphi ... Emva koko uya kufunda konke malunga nokutolikwa ngokubanzi kwesimboli emaphupheni!
1 "Ungayihoyi" isimboli yamaphupha: amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ukungahoywa, kutheni lento isenzeka kum ndilele?
1.2 Uyandihoya! Iphupha elibi
2 Uphawu lwephupha «ukungahoyi» - ukutolikwa ngokubanzi
3 "Ungayihoyi" isimboli sephupha - ukutolika kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ukungahoyi» - ukutolika kokomoya
"Ungayihoyi" isimboli yamaphupha: amaphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ukungahoywa, kutheni lento isenzeka kum ndilele?
Nabani na ongakhathalelwanga ephupheni lakhe unokuziva ngokufanayo el mundo ukuvuka. Kuxhomekeke ekubeni ngubani ongakhathaleliyo umphuphi kumava ephupha, kunokwenzeka ukuba unengxaki nomntu kubomi bokwenyani. Inokuba liqabane lakho, ilungu losapho okanye abahlobo bakudala. Ukusilela kobizo-magama kuhlala kusisiseko sephupha ukuba akukho mpendulo ngaphandle konxibelelwano ngqo: umntu ephupheni uziphatha ngokungathi umntu oleleyo unomoya.
Ukuba uzifumana uphakathi kwesihlwele kwaye wonke umntu akakuhoyi, abo bakhutshelwe ngaphandle banokuba nesifo sokuzithemba okuphantsi.
Uyandihoya! Iphupha elibi
Ukuba iqabane lakho alihoyanga iphupha elo ephupheni, oku kubonisa, ngokutolikwa ngokubanzi kwephupha, ikakhulu ubunzima kunxibelelwano. Kusenokubakho iingxaki kwintsebenziswano, kodwa iqabane alizilungisi. Ukuba iqabane langaphambili lingahoyi umntu oleleyo ephupheni, ubudlelwane buphelile.
Utata, ongamhoyiyo umntu ophuphayo, ufuzisela ilungu lomntu losapho ekulweni nalo. Umntu osebenza naye ongazi nto ubhekisa kwiingxaki kwilizwe eliqeqeshiweyo.
Uphawu lwephupha «ukungahoyi» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokuqhelekileyo kuthathelwa ingqalelo ukuba uphawu lwephupha "ukungahoyi" kunika iphupha umkhombandlela wokuba ngenxa yeenzame zakho kwihlabathi lokuvuka. ngempumelelo iya kuba. Ngokukodwa ukuba iphupha alihoywa kwanaxa ulele, oku kutolikwa kwesimboli yephupha kuyasebenza.
Kodwa kubalulekile ukutolikwa kwamaphupha oko liphupha lityesheleyo ephupheni. Oku kufuneka kuthathelwe ingqalelo ngokusondeleyo njengoko kunokunika ulwazi olongezelelekileyo ekutolikeni uphawu lwephupha 'ukungahoyi'. Ukuba kukho imfuneko, kufuneka utolike iisimboli zamaphupha ahambelanayo.
Ukuba iphupha libahoya abanye abantu ephupheni lakho, oku kungakubonisa ukuba ukwilizwe lokuvuka. ingqalelo encinci Iminqweno. Mhlawumbi ilizwe lokuvuka likhulu kakhulu kuye kwaye ulufuna ngamandla uxolo kunye nemfihlo.
Nangona kunjalo, ukuba abanye ephupheni abalihoyi iphupha, ukutolikwa ngokubanzi kwephupha kukubonisa ukuba kuya kufuneka wazi ngamaxabiso wakho angaphakathi.
Ukungazi iqabane ephupheni kubonisa ubunzima okanye ingxaki yonxibelelwano ephupheni. ulwalamano phakathi. Kukho into ebonakala ingalunganga kwihlabathi elivukayo. Umphuphi uzama, nangona kunjalo, ukuvala amehlo akhe kuye kwaye angazihoyi izinto angafuni ukuzibona. Nangona kunjalo, ekuhambeni kwexesha, oku kuziphatha kuya kukhokelela kwiingxaki ezinkulu ngakumbi. Ukuba iphupha alihoyi ilungu losapho ephupheni, oku kubonisa ukuba kufuneka ucacise ezinye izinto kwindawo yosapho.
"Ungayihoyi" isimboli sephupha - ukutolika kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha lufuna "ukungahoyi" ukwenza kucace ukuba iphupha liyaliwa kwilizwe elivukayo, i-verdad ukuqonda. Uhlala kwilizwe lakhe elincinci kwaye uphulukene nengqondo yenyani. Mhlawumbi ufuna ukujonga nje izinto ongazithandiyo.
Ukuba iphupha alihoywa ephupheni linani elikhulu labantu, le meko yephupha ifanekisela iingxaki ngobuntu bakhe kuye. Ukuzithemba kwakhe kusezantsi. Unobangela wezi mvakalelo ubuyela kwinqanaba lokunxibelelana.
Iphupha ngoku lifumana "ukungahoywa" ngophawu lwephupha. isiceloukuphanda nokulungisa ezi zizathu. Ukuba kukho imfuneko, kuya kufuneka uphinde ufune uncedo lweengcali.
Uphawu lwephupha «ukungahoyi» - ukutolika kokomoya
Icala lokomoya lokuchazwa kwephupha litolika uphawu lwephupha "ukungahoyi" njengohlobo lwe Ukungazi kunye nokubonisa oko Iimvakalelo.